हिमाल खबरपत्रिका | अर्थतन्त्रलाई धानको टेको
अर्थतन्त्रलाई धानको टेको
यो वर्ष धानसहितका कृषि उत्पादनको उत्साहजनक बढोत्तारीले आर्थिक वृद्घिमा राम्रै भरथेग गर्ने आकलन छ।
मुलुकको प्रमुख कृषि बाली धानको उत्पादन गएको वर्षभन्दा ८.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्ष भएको कुल धान उत्पादन ५६ लाख १० हजार टन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो । गएको वर्ष ५१ लाख ५१ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीका अनुसार अनुकूल मौसम, रोपाइँको क्षेत्रफल वृद्धि, उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोगका कारण धान उत्पादन बढेको हो । यो वर्ष गएको वर्षभन्दा २० हजार हेक्टर बढी जग्गामा धान खेती भएको थियो । मलखादको अभाव हुन नपाएको, यान्त्रिकीकरणमा सहयोग पुगेको तथा उन्नत बीउबिजन वितरण भएका कारणले धान उत्पादन बढेको सचिव जिसीको दाबी छ । उनी भन्छन्, “पर्याप्त वर्षाका कारण समयमै रोपाइँ हुनसक्यो, बाढी र कटानसमेत पोहोरजस्तो भएन त्यसैले पनि धानको उत्पादन बढायो ।” धान खेती हुने जग्गामध्ये करीब ९७ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गएको वर्ष यो ८६ प्रतिशत मात्र थियो । धान उत्पादन बढेसँगै यसको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.७६ टन पुगेको छ । गएको वर्षसम्मको तुलनामा यो प्रतिहेक्टर ०.२५ टनले बढी हो ।
तैपनि बढेको यो उत्पादनले समेत मुलुकभरको न्यूनतम मागलाई थेग्दैन । अहिले धानको कुल माग वार्षिक ६१ लाख टन छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीना (साउन–कात्तिक) मा भारतबाट रु.९ अर्ब ३५ करोडको धान–चामल आयात भइसकेको छ । धानको बढेको उत्पादनले सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भने भरथेग गर्नेेछ । “धानको उत्पादनले आर्थिक वृद्धिमा १ प्रतिशतसम्म सहयोग गर्ने अनुमान छ”, मन्त्रालयको तथ्याङ्क शाखाका प्रमुख रामकृष्ण रेग्मी भन्छन् ।
सकारात्मक कृषि उत्पादन
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान २७.१० प्रतिशत छ । कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये धानले २१ प्रतिशत ओगटेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अधिकारीहरू धानसहित कृषि बालीको उत्पादन यो पटक सकारात्मक देखिएकाले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । तथ्यांक विभाग स्रोतका अनुसार यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन १.५ प्रतिशतले कम हुँदा पनि समग्र कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.७२ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो ।
कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब १० प्रतिशत भूमिका रहेको तरकारीको उत्पादन यो वर्ष करीब ८ प्रतिशत वृद्धि हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । गएको वर्ष तरकारीको उत्पादन ५ प्रतिशत मात्रै बढेको थियो । कृषि मन्त्रालयले १४औं योजनाको कृषि उत्पादनको लक्ष्यमध्ये धान, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी, तेलहन, उखु, अण्डा, दूध, माछाको उत्पादनमा लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव जिसी भन्छन्, “फलफूल, दलहन र मासुबाहेक मुख्य कृषि वस्तुमा लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल हुने देखिएको छ ।”
आर्थिक वृद्धि कति ?
तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कृषि, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् तथा पर्यटनसहितका सेवा उद्योगसहित सबै क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा राम्रै विस्तार देखिएकाले पहिलो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक हुने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
निर्माण र उद्योगसम्बन्धी मेसिनरीको बढेको आयातका कारण पनि आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार भइरहेको देखिने तथ्याङ्क विभागका ती अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि, गएको वर्ष १०.६४ प्रतिशतले बढेको निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर यो वर्ष केही खुम्चने आकलन छ ।
सरकारले यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आन्तरिक बैठकहरूमा बताउने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले शुरूमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि (उत्पादकको मूल्य) हुने बताए पनि पछि त्यसलाई बढाएर ६.५ प्रतिशत हुने आकलन गरिसकेको छ । एशियाली विकास ब्याङ्कले भने चालु आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ । वितेका दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले क्रमशः ७.४ प्रतिशत र ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । यस वर्ष ७ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धि भए त्यो नेपालका लागि दुर्लभ अवसर हुनेछ । यो वर्ष कृषि क्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई उचाल्न मद्दत गर्नेमा अधिकारीहरू विश्वस्त छन् ।